अनलाइन पेमेन्ट | Integration Through Media ....!
Tuesday, 29 May 2012 12:13 | Nepal24 hours Share/Bookmark
आधा रातमा मोवाइलमा पैसा सकियो ? पसल बन्द छन् । फोन नगरी भएको छैन । चिन्ता नलिनुस् । अनलाइन बैंकिङले तपाईको टाउको दुखाइ भगाउने छ । इन्टरनेट बैंकिङ मार्फत अधिकांश बैंकले प्रदान गर्ने ‘युटिलिटी पेमेन्ट’ सुविधा त्यसैका लागि हो । आफ्नो बैंक खातामा लग इन गर्नुस् । दूरसञ्चार कम्पनीका रिचार्ज कार्ड किन्नुस् । अब तपाईको मोबाइल रिचार्ज भयो । ढुक्कसँग फोन गर्नुस् ।
नयाँ प्रविधिलाई धन्यवाद दिए हुन्छ, जसले तपाईलाई आधारातमा रिचार्ज कार्ड उपलब्ध गरायो । बैंकको काम अब निक्षेप संकलन, कर्जा लगानी जस्ता कारोबारमा मात्र सीमित रहेन । खातामा पैसा
हुनुपर्‍यो । बजारमा पाउने सेवादेखि वस्तुसमेत तपाईकहाँ हाजिर हुन्छन् । त्यो पनि अतिरिक्त शुल्क नतिरी । छैन त कमाल ? न दूरसञ्चार कार्यालय, विद्युत् प्राधिकरण, स्कुल, इन्स्योरेन्स, फिल्म हल, एयरलाइन्स टिकट काउन्टर अगाडि लाइन लाग्ने झन्झट । न मोटरसाइकलमा पेट्रोल सिध्याउँदै किनमेल गर्न
डिपार्टमेन्टल स्टोर, सपिङ मल धाउनुपर्ने चिन्ता । सारा समस्याको समाधान, त्यो पनि सित्तैमा ।
अधिकांश बैंकले ‘युटिलिटी पेमेन्ट’ भन्ने यस्ता सुविधा दिएका छन् । पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा आएको तीव्र प्रतिस्पर्धाले ग्राहकलाई आकषिर्त गर्न अतिरिक्त सेवा दिने क्रम बढेको छ । भर्खरै ग्राहकलाई विद्युत् प्राधिकरणको बिल भुक्तानी गर्ने सुविधा दिएको प्राइम बैंकका हेड अफ आइटी डिपार्टमेन्टका सुनिल महर्जन भन्छन्, ‘ग्राहकहरू सीमित सेवा दिनेभन्दा नयाँ र आफूलाई उपयोगी सेवा दिने बैंकसँग कारोबार गर्न आकषिर्त हुन्छन् ।’
वाणिज्य बैंकदेखि यो सेवा दिने क्रम विकास बैंक हुँदै फाइनान्स कम्पनीसम्म पुगेको छ । ‘अनलाइन बैंकिङ, युटिलिटी पेमेन्ट लगायत सुविधा बैंकले दिने आधारभूत सेवाजस्तै भएका छन्,’ मोबाइलबाट मोबाइलमा पैसा पठाउन मिल्ने सेवा सुरु गर्न लागेको मनकामना डेभलपमेन्ट बैंकका आइटी प्रमुख पवन शर्मा भन्छन्, ‘समय, धन र इन्धनको बचत हुने भएकाले ग्राहकबीच यस्ता सेवा लोकपि्रय हुँदै गएका छन् ।
बैंकहरूले दिने यस्ता अतिरिक्त सेवाको भुक्तानी तरिका फरकफरक छन् । पानी, बिजुली, कलेज, विद्यालयका शुल्क ग्राहकले बैंकमा आफैं जम्मा गर्न सक्छन् । बैंकलाई अनुरोध गरेर निश्चित अवधिमा आफ्नो खाताबाट ती निकायलाई भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउन पनि सकिन्छ । त्यसबाहेक इन्टरनेटमा अभ्यस्त हुनेहरूले बैँक तथा वित्तीय संस्थाबाट अनलाइन बैंकिङ सुविधा लिएर आफैं वस्तु र सेवा प्रदायकको खातामा रकमान्तर गर्न सकिन्छ ।
अनलाइन बैंकिङ आफूले जहाँसुकैबाट र जहिलेसुकै अरूलाई रकम भुक्तानी गर्न सक्ने सुविधा हो । मनकामनाका आइटी प्रमुख शर्माका अनुसार यो सुविधा लिन सम्बन्धित व्यक्तिले बैंकमा गएर र्फम भर्नुपर्छ । त्यसमा ग्राहकले अनलाइन बैंकिङबाट पाइने कुनकुन सेवा उपभोग गर्ने हो खुलाउनुपर्छ । त्यसपछि बैंकले युजर नेम सहित आफ्नो खाताको विवरण
-स्टेटमेन्ट) मात्र हेर्न एउटा र रकमान्तर गर्न अर्को गरी दुईवटा पिन नम्बर (पासवर्ड) उपलब्ध गराउँछ ।
ग्राहकले बैंकको साइटमा युजर नेम र पासवर्ड सहित लग इन गरेपछि आफ्नो खातामा पहुँच पाउँछ । त्यहा उसले आफ्नो खातामा रहेको रकम, झिकेको, राखेको र बैंकले दिएको ब्याजबारे जानकारी पाउँछ ।
त्यसअतिरिक्त उसले बैंकमा खाता रहेको अर्को ब्यक्तिलाई आफ्नो खाताबाट रकमान्तर गर्ने, बस्तु वा सेवाको भुक्तानी गर्ने भए अर्को पासवर्ड प्रयोग गर्नपर्छ ।
पछिल्लो समय अधिकांश बैंकले नेपाल टेलिकमका पोस्टपेड, पि्रपेड, सिडीएमए, आधारभूत र एडिएसएलको विल तिर्ने सुविधा उपलब्ध गराएका छन् । यस्तै एनसेलको मोवाइलमा रिचार्ज गर्ने सुविधासमेत बैंकहरुले दिएका छन् । त्यसबाहेक ब्रोडलिंकका इन्टरनेट रिचार्ज कार्ड किन्ने सुविधा लक्ष्मी र इन्भेस्टमेन्ट बैंकले दिइरहेका छन् । प्राइमले पहिलो पटक भर्खरै विद्युत प्राधिरणको रत्नपार्क शाखाबाट तिर्नु पर्ने विलको भुक्तानी बैंकबाट गर्न सकिने सुविधा दिएको छ । यो सेवा प्राउने ३७ हजार ग्राहक छन् ।
प्राधिकरणको सेवा दिने प्रणाली र बैंकको प्रणालीबीच तालमेल नमिल्दा सबै ग्राहकलाई बिल तिर्ने सुविधा दिन नसकिएको बैंकका आइटी प्रमुख महर्जनले बताए । ‘बैंकको सेवा केन्द्रीय सर्भर सिस्टममा छ,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणको शाखापिच्चे सर्भर हुने भएकाले एकअर्को शाखा केन्द्रसग जोडिएका रहेनछन् ।
त्यसैले हामीले सबै शाखाका ग्राहकलाई सेवा दिन सकेका छैनौ ।’ उनले प्राधिकरणले सबै शाखालाई केन्द्रीय प्रणालीमा आवद्ध गराए आफूहरु सबै ग्राहकलाई बिल तिर्ने सुविधा दिन तयार रहेको बताए । ‘पहिले प्राधिकरण सबै ग्राहकलाई सेवा दिन तयार हुनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘हामी आफ्नो तर्फबाट तयार छौं ।’
इन्भेस्टमेन्टले इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर (आइएसपी) को सुल्क, एलिको इन्स्योरेन्सको पि्रमियम, रातोबंगला, युलेन्स, लिलिल एन्जल्स, त्रियोग, मारिया मन्टेश्वरी, शुभतारा, ओलंपिया वल्र्ड लगायतका स्कुलको शुल्क, सस्तो डिल, मेरो डिलजस्ता ग्राहकका लागि मोलमोलाई -बार्गेन ) गरिदिने वेवसाइट, हरिलो डटकम, मुन्चा डटकम, गिफ्टमान्डुजस्ता अनलाइन सपिङमा भुक्तानी दिनमिल्ने सुविधा दिएको बैंकका आइटी प्रमुख उज्ज्वल मानन्धरले जानकारी दिए । अनलाइनबाट किन्दा ग्राहकले केही सस्तोमा सामान पाउछन् । ‘हाम्रो अनलाइनबाट यति एयरलाइन्सको टिकट ग्राहकले टूाभल्स एजेन्टसगभन्दा सस्तोमा पाउछन्, उनले भने । यतिले टूाभल्स एजेन्टलाई दिने कमिसन कटाएर ग्राहकसग टिकटको मूल्य लिने गरेको छ । यस्तै नेपाल डेरिभेटिभ एक्स्चेन्ज -एन्डेक्स)को भुक्तानी, क्युएफएक्स सिनेमा हलका टिकट, माइ टिूप टु नेपालमार्फत स्वदेशी तथा बिदेशी एयरलाइन्सको टिकट, होटल बुकिङ गर्न पैसा अनलाइनबाटै तिर्न सकिने सुविधा इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा छ ।
बैंकको अनलाइन सुविधा एक खाताबाट अर्कोमा रकम स्थानान्तरणमा बढी प्रयोग हुने गरेको छ । बोकेर हिड्दा सुरक्षाको चिन्ता हुने, अनलाइनबाट तुरुन्तै पैसा अर्कोको खातामा पुगेको जानकारी पाइने भएकाले यो सुविधा उपयोगको क्रम बढेको बैँकरहरु बताउछन् । ‘अनलाइन फन्ड टूान्सफर दैनिक करोडौंको हुने गरेको छ, इन्भेस्टमेन्टका आइटी प्रमुख मानन्धरले भने, अनलाइन सपिङ, सेवा शुल्क भुक्तानीसमेत बढ्दो क्रममा छ ।
सूचना प्रविधिको बढ्दो विकासले बैंकमार्फत हुने भुक्तानी सुविधालाई वास्तविक (रियल) बाट काल्पनिक (भर्चुअल) दुनियातिर लैजादै छ । बिस्तारै वित्तीय संस्थाहरु शाखारहित कारोबार सुरु गर्न थालेका छन् । यस्तो अवस्थामा बैंकहरुले दिने सेवा कति विस्तार होला ? झट्टै कल्पना गर्न गाह्रो छ । आधा दशकयता बैंकिङ क्षेत्रले प्रदान गर्ने सुविधामा आएको विविधता हेर्दा अनुमान गर्नै नसकिने अवस्था भने छैन । ‘भोलिका दिनमा हामीले जहासुकै गर्ने खर्च बैंकमार्फतै हुने अवस्था आउन सक्छ, इन्भेस्टमेन्टका आइटी प्रमुख मानन्धर भन्छन्, ‘अहिलेसम्मको विकास हेर्दा त्यस्तै देखिन्छ ।’ बैंकहरुले दिएको युटिलिटी पेमेन्ट सुविधाले ग्राहक, बस्तु/सेवा प्रदायक र बैंक तिनैथरी लाभान्वित हुन्छन् । बैंकले अतिरिक्त सेवा दिएर ग्राहकलाई आफूतिर आकषिर्त गर्छन् । ग्राहकले घरमै बसीबसी थप सुविधा उपयोग गर्न पाएका छन् । सेवा प्रदायकको हरेक ग्राहकसग पैसा उठाउन लाग्ने कर्मचारी थोरैले भए पुग्छ । प्रसासनिक खर्चसमेत घट्ने बैंकका कर्मचारीहरु बताउछन् ।